Ukudibanisa njani isixhobo sakho seAudio DSLR sokwenza ifilimu
Ukuveliswa kwefilimu kunye nokuveliswa kwevidiyo kuxhomekeke kumgangatho ophezulu weaudiyo. Yiyo loo nto iikhamera zevidiyo eziphezulu kunye nezixhobo zomsindo zisebenzisa iintambo ezikumgangatho ophezulu zeXLR. Kwelinye icala, i-DSLR yakho ine-3.5 mm mini-plug. Kodwa umahluko phakathi kweeplagi kunye neentambo ayisosizathu sodwa sokufuna iadaptha.
Iplagi encinci: Ii-DSLR zisebenzisa i-3.5 mm mini-plug yegalelo lokumamela. Iimakrofoni ezithengiswe ngokukodwa kwi-DSLR zinegalelo elincinci le-plug. Olu luhlobo olunye lweplagi ekwii-headphone ze-iPod okanye zekhompyuter yakho.
Ipilisi yeorenji i-2
XLR uqhagamshelo: Iipini ezintathu ze-XLR zokudibanisa yimigangatho yoshishino lweempawu zomsindo olinganiselayo. Ezi ntambo zomsebenzi onzima ziza ngobude obahlukeneyo kunye nokudityaniswa kwamadoda / kwabasetyhini.
Iikhamera zeDSLR zisebenzisa iplagi encinci yokufaka igalelo, ngelixa iimakrofoni zomgangatho wobungcali zisebenzisa iintambo ezintathu ze-XLR.
Nangona unako ukuvelisa i-audio eyamkelekileyo nge-mini-plug, ayisiyongxaki ngokwaneleyo xa usebenzisa iimakrofoni ezikumgangatho ophezulu okanye ungena kwibhodi yesandi.
Ukuba ufuna ukusebenzisa imakrofoni esemgangathweni wobuchule kunye neXLR, kuya kufuneka ufumane iadaptha yokubenza badlale kakuhle kunye. Kuyinto efikelelekayo efikelelekayo ebiza naphi na ukusuka kwiidola ezimbalwa ukuya kumakhulu aliqela. Esi sixhobo asidibanisi kuphela imakrofoni kwikhamera, kodwa ikwafaka ikhamera kwibhodi yesandi yokurekhoda ngokufanelekileyo iminyhadala efana neekonsathi, imidlalo kunye namaqela.
Le bhokisi encinci, ilula kwaye ikuvumela ukuba uqhoboshele imakrofoni ye-XLR okanye ezinye iisiginali zekhamera enekhamera enye ene-3.5 mm mini-plug microphone.
Ezi adapters ziphucula kwaye zandise amandla e-audio ye-DSLR ukuya kwinqanaba levidiyo yecamcorder.
Esinye isizathu sokuba kube licebo elilungileyo ukusebenzisa esi sixhobo: Igalelo lakho lomsindo weDSLR likuvumela ukuba usebenzise imakrofoni enye kuba ikhamera inegalelo elinye kunye nokunyamezelana kokuthintela ukuhlangana ngombhobho omnye. Ungazami ukudibanisa ii-microphones ezimbini kule galelo ngekhebula le-Y - ilahla ibhalansi ye-impedance, ekhokelela kwisandi esibi, esingenakusebenziseka.
Iimpawu ze-hernia ze-umbilical
Iadaptha zokuxuba imigca ziza nezinto ezahlukeneyo. Ezinye iimodeli zibonelela ngombhobho we-condenser ngamandla e-phantom. Bafuna umbane omncinci ukuze basebenze. Isixhobo esikwi-microphone esixhonyiweyo kuhlala sinikezela ngesixa esincinci samandla. Ezinye iimodeli zithumela amandla ngaphandle kwentambo yemakrofoni ukunika amandla imakrofoni exhunyiwe. Abanye bayakuvumela ukuba utshintshe igalelo labo ukwamkela nokuba yeyiphi inqanaba le-mic okanye Inqanaba lomgca imiqondiso:
Inqanaba lomgca: Inqanaba lomgca sisiginali esomeleleyo esisetyenziselwa ukuhambisa iaudiyo isuka komnye umthombo njengebhodi yokuxuba yeaudio ngokuchaseneyo nombhobho wangaphandle.
Inqanaba leMic: Misela ikhamera kwesi silungiselelo ukuba usebenzisa imakrofoni yangaphandle. Iimakrofoni zifuna umqondiso omncinci ukurekhoda umsindo. Ukuba useta iadaptha kuMgca, ivelisa isandi ngokungxolayo nangokugqwethayo.
windows 10 ukuseta inethiwekhi yasekhaya
tsala umsipha ngesandla
isetyenziselwa ntoni venlafaxine
uyichukumisa njani imoto yepeyinti
izibonelelo zempilo zeoyile ye-cbd
ipilisi emhlophe ene-r180
Iindlela ezintathu zokufowuna kwi-iphone